News 18 Nepal || कस्तो होला यो साता तपाईको भाग्य ? हेर्नुहोस् राशिफल
यो साता नयाँ व्यक्तिसंग भेटघाट होला । आदर्श ब्यक्ति सँगको सहकार्यले नयाँ अनुभव मिल्नेछ । पार्टी, पिकनिक तथा सेमिनारमा सहभागी भईएला । बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । साताको मध्य भागमा आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । घरायसी झमेलामा परिनेछ ।
यो साता सहकर्मीबाट विरोध आउला । स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या आउनसक्छ । आर्थिक कारोवारमा बिवाद आउनेछ । बुधवारबाट इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । सुन्दर पहिरनले ब्यक्तित्वमा निखारता ल्याउनेछ ।
यो सातामा पुनर्मिलनको योग रहेको छ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । महिला वर्गबाट विषेश सहयोग मिल्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट सफलता मिल्नेछ । विश्वास गरेकाले साथ दिनेछन् । अतिथिको रूपमा सत्कार पईनेछ । कार्य सम्पादनमा सहजता मिल्नेछ । वित्तीय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ ।
यो साता वैदेशिक कार्य अघी बढ्नेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ । शेयरको कारोवारबाट सफलता मिल्नेछ । सामाजिक र राजनीति कार्यमा सफलता मिल्नेछ ।
यो साता रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । आँटेको र ताकेको कार्य पुरा होला । लगनशीलताले कामहरू अगाडी बढ्नेछन् । सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा रुची बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ ।
यो साता बित्तिय संस्थाबाट सहयोग पाईनेछ । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्ने देखिन्छ । वैदेशिक क्षेत्रको काम अघी बढ्नेछ । शिक्षामा सफलतापनि मिल्नेछ । साताको उत्तरार्धमा प्रतिद्वन्दी हरूले कार्यमा अवरोध ल्याउन सक्छन् । व्यापार व्यवसायमा वाधा आउनेछ ।
यो समय निकै उत्साहजनक रहनेछ । शत्रुपनि पराजित हुनेछन् । मनोरञ्जनमा सहभागीता भइएला । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् । बुधबारबाट प्रेममा बाधाका साथै बन्न लागेको काम विग्रनसक्छ । शैक्षिक क्षेत्रपनि कमजोर रहनेछ ।
यो हप्ता नसोचेको ठाउँबाट धनागम हुनेछ । दाजुभाइ, दिदीबहिनीले तपाईंका सकारात्मक विचारलाई समर्थन गर्नेछन् । मनमा शान्ति र अनुहारमा कान्ति छाउला । वैदेशिक क्षेत्रबाटपनि सफलता मिल्नेछ । कला,साहित्य तथा संगीतमा रुचि बढ्नेछ ।
यो साता धार्मिक तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । मनको डरले सताए पनि व्यवहारमा फाइदा हुनेछ । शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ । विशिष्ठ व्यक्तिको साथ पाईनेछ । मध्य सातामा मनमा निरासा र शरीरमा आलस्य आउला । सौन्दर्यतामा धन खर्च हुनेछ ।
साताको प्रारम्भिक दिनमा स्वास्थ्यमा गडबडी भई दैनिक कामकाजमा असर पर्नसक्छ । विपक्षीको छलकपट तथा जालझेलबाट सावधान रहनुपर्नेछ । सोमवारबाट अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउनेछ । लामो समय देखि रोकिएको अधुरो कार्यले पूर्णता पाउनेछ ।
रमाइलो यात्राको योग रहेको छ । प्रेम जीवन सफल र सुखद् रहने देखिन्छ । नयाँ कामको थालनी र व्यापार व्यवसायमा सफलता पाईनेछ । साताको मध्यमा नियमको अनुशासनलाई बेवास्ता गर्दा अवसर र लाभ गुम्न सक्छन् । शुभारम्भको चर्चापनि चल्नेछ ।
यो सातामा मिश्रित फल मिल्नेछ । आर्थिक झन्झट आइलाग्न सक्छ, तर अन्तिममा कार्य सम्पादन हुनेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल हुने देखिन्छ । मध्य साताबाट धर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ । लामो समयदेखि रोकिएका अधुरा कामहरू पुरा हुनेछन् ।
मंसिर १० गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
कोरोनाविरुद्धका खोप बारे डब्लुएचओले किन गर्दैछ चिन्ता ?
अक्सफोर्डले बनाएको कोरोना खोप बारे आयो खुसीको खबर !
नेपालका यी जिल्लामा छन् पाँच सयभन्दा बढी सक्रिय कोरोना संक्रमित
मंसिर ०९ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
यौनपिपासुहरूलाई फाँसी दिने कानुन बनाउन किन हिचकिचाउँछ सरकार ?
नेपालमा थप १,९४८ जनामा कोरोना पुष्टि, २८ जनाले गुमाए ज्यान
पूर्व युवराज पारस शाह अस्वस्थ, कस्तो छ अवस्था ?
भीमेश्वरको शीलामा पसिना आएपछि राष्ट्रपतिलाई महाप्रसाद पठाइयो
युवतीसँग होटलमा समातिएका डिएसपी भरत